युक्रेनमा रुसी हमला जारी, थाहा पाउनुस् अहिलेसम्म के के भयो ? — Sanchar Kendra
युक्रेनमा रुसी हमला जारी, थाहा पाउनुस् अहिलेसम्म के के भयो ?
काठमाडौँ । २८ फेब्रुअरीमा रुस र युक्रेनबीच पहिलो चरणको वार्ता कुनै निष्कर्ष बिना टुङ्गियो ।
– यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युरोपियन युनियनसँग सदस्यताको माग राखेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् र संयुक्त राष्ट्र आम सभा दुबै रुसी हमलाका लागि सक्रिय हुन् ।
– यूएनजीएको विशेष सत्रमा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एन्टोनियो गुटेरसले कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियारको प्रयोगलाई सही ठहर गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
– संयुक्त राष्ट्रमा भारतको स्थायी प्रतिनिधि टिएस तिरुमूर्तिले सुरक्षा परिषद्लाई भारतले सरकार एक मार्चदेखि युक्रेनमा मानवीय मद्दत पठाउन सुरु गरिरहेको बताएका छन् । यसबाहेक भारत सरकारका वरिष्ठ मन्त्री भारतीय नागरिक र विद्यार्थीलाई सुरक्षित निकाल्नका लागि युक्रेनको छिमेकी देशमा जाने बताइएको छ ।
– रुस युक्रेनमाथि हमलाका कारण विश्वव्यापी एक्लोपनको सामना गरिरहेको छ । अमेरिकाले सोमबार १२ रुसी कुटनीतिज्ञलाई यूएन मिसनबाट फिर्ता जान भनेको छ ।
– २१ फेब्रुअरीमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पूर्वी युक्रेनका दुई अलगाववादी इलाका दोनेत्स्क र लुहान्स्कको स्वतन्त्र क्षेत्रको रुपमा मान्यता दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सैन्य अभियानको घोषणा गरिएको थियो ।
– इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्टका अभियोजक करिम खानले सोमबार उनले युक्रेनमाथि हमलाको अनुसन्धान सुरु गरेको बताएका छन् । उनले सुनुवाई तीब्र गतिमा हुने बताएका छन् । करिम खानले भने, ‘मैले निर्णय गरेको छु कि यो मामिलाको सुनुवाई यथासम्भव तीब्र गतिमा गरिनेछ ।’
– समाचार एजेन्सी एएफपीले भन्यो, ‘करिम खानले युक्रेनमा सन् २०१४ पछिदेखि मानवताविरुद्ध अपराध भएको कुरा स्वीकार गर्न पर्याप्त कारण भएको बताएका छन् ।’ युक्रेनका राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यताबाट रुसलाई हटाउने माग गरेका छन् ।
– युक्रेनको पूर्वोत्तर शहर ओखत्यार्कामा आइतबार रुसी हमलामा आइतबार युक्रेनका करिब ७० सैनिकको मृत्यु भएको छ । यो इलाकाका प्रशासक दिमित्रो जयवयुस्क्यीले रुसी हमलामा एक सैन्य युनिट ध्वस्त भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘थुप्रैको मृत्यु भएको छ । ७० युक्रेनी सैनिकको अन्तिम संस्कारको तयारी भइरहेको छ । तर दुश्मनले पनि त्यहि पाएका छन् जुन उनीहरुले पाउनुपर्छ । रुसी नागरिकका थुप्रै शव हुन् जुन रेड क्रसलाई सुम्पिएको छ ।’
यसैबीच युक्रेनले कुनै पनि हालतमा आत्मसमर्पण नगर्ने बताएको छ । युक्रेनका विदेशमन्त्री दिमित्रो कुलेबाले सीएनबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफूहरु कुटनीति समाधानका लागि तयार भएको तर आत्मसमर्पण नगर्ने बताएका छन् । उनले आफूहरु रुसको शर्तको अगाडि नझुक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
युक्रेनका विदेशमन्त्रीको यो बयान त्यतिबेला आएको हो जब सोमबार बेलारुसमा रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । कुलेबाले वार्ता कहिलेसम्म चल्नेछ भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ भएको बताएका छन् । उनले यो युद्धमा युक्रेनकै जीत हुने पनि बताएका छन् ।
कुलेबाले सीएनबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा भने, ‘म एक कुटनीतिज्ञ हुँ र मलाई वार्ताको सफलतामाथि विश्वास छ । तर एक कुटनीतिज्ञ भएको नाताले मेरो लक्ष्य रुसमाथि अधिकतम प्रतिबन्ध लागोस् भन्ने हो । युक्रेनले धेरैभन्दा धेरै हतियार पाओस् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रुसलाई एक्ल्याइयोस् । यो मेरो कुटनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।’